संसद्को खाना-नास्ता खर्च : तीन वर्षमा ११ करोड
संसद्को खाना-नास्ता खर्च : तीन वर्षमा ११ करोड	By नवीन सन्देश on	१९ आश्विन २०७३, बुधबार १०:१४
काठमाडौँ । संसदमा खाजा–खानाका लागि मात्रै तीन वर्षमा १० करोड ७८ लाख १९ हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि ०७२/७३ सम्म संसद् सचिवालयले संसदीय समिति, संसदीय दल र सभामुख, उपसभामुखको सचिवालयमा खाना–खाजाको नाममा सो बराबरको रकम खर्च गरेको छ ।
पछिल्ला दिनमा खाना–खाजा कुपनको व्यापक दुरुपयोग हुन थालेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन भन्दै खाजा खाना कुपन गत १ भदौं वाट कटौती गरेकी थिइन् ।
त्यसको सट्टा संसद सचिवालयले समिति वैठक चल्दा समिति सदस्यहरुलाई विगतमा दिइदै आएको १ सय ५० रुपैया भत्तामा २५० रुपैया थप गदै ४ सय रुपैया उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
कुन आर्थिक वर्षमा कति खर्च ?
पछिल्लो तिन वर्षमा संसद सचिवालयले खाना खाजामा मात्रै कुल १० करोड ७८ लाख १९ हजवार ९ सय ३५ रुपैया ३१ पैसा खर्च गरेको छ ।
आथिर्क वर्ष २०७०/०७१ मा १ करोड ५ लाख, ०७१/०७२ मा ४ करोड ६० हजार ५८ हजार २ सय १० र आर्थिक वर्ष २०७२(०७३ मा ५ करोड १२ लाख ६१ हजार ७२४ रुपैया ७१ पैसा खाना खाजामा सचिवालयले खर्च गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिक
तपाइँकॊ प्रतिक्रिया : Related Posts ५ कार्तिक २०७३, शुक्रबार १०:२१ 0	कार्कीलाई जोगाउन रअ र राजदुत सक्रिय
५ कार्तिक २०७३, शुक्रबार १०:१० 0	धर्म राजनीतिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र
५ कार्तिक २०७३, शुक्रबार १०:०८ 0	लोकमान जोगाउन रातभर सुतेका छैनन् भारतीय राजदूत रे
५ कार्तिक २०७३, शुक्रबार १८:०६ 0
अन्तत: बल्यो पाइपलाईनबाट ग्यास
५ कार्तिक २०७३, शुक्रबार १६:५० 0
“सिद्धार्थ ई–सेवा खाता” संचालनमा
५ कार्तिक २०७३, शुक्रबार १५:४७ 0
स्थानीय तह पुनर्संरचनाको कार्यविधि तयार
५ कार्तिक २०७३, शुक्रबार १४:४९ 0
भारतीय सांसदबिरुद्ध हिन्दु सम्मेलनमा बिद्रोह
तस्वीर	नेविसंघकाे चुनावी राैनकमा जे देखियाे तस्वीर प्रमिला लम्साल Read More
शिद्ध गुफामा ग्राहक कुर्दै स्थानिय गाईड बन्दिपुर, तनहुँमा पर्ने शिद्ध गुफामा ग्राहकको प्रतिक्षा गर्दै स्थानिय गाईडहरु ...
नेपाली मोडलको अहिलेसम्मकै हट फोटोशुट, नो ड्रेस ! (फोटोफिचर) काठमाडौँ । परापूर्वकालमा मान्छेले रुखका पातले शरीर ढाक्थे रे । अचेलका पुस्तालाई ...
पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितको टेम्पो यात्रा (फोटोफिचर) काठमाडौँ । स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासनमन्त्री भएर लोकप्रिय बनेका लालबाबु ...
हलिउड नायिका एन्जेलिना जाेली हलिउड नायिका एन्जेलिना जाेली । उनी चर्चित हलिउड नायिका हुन् ...